သကျဦး: December 2007
ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပွဲတော်ကျင်းပရာ Fyn ကျွန်းဆွယ်ပေါ်ရှိ Ringe မြို့သို့ ပွဲတော်မကျင်းပမီ တရက်အလိုကပင် ပရိသတ်အတော်များများ ရောက်ရှိလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အခမ်းအနားအစီအစဉ်တွင် ဘာသာရေး ဆုတောင်းပွဲ၊ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ကရင်ဒုံးယိမ်းအက၊ အခြားတိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည့် ရှမ်း၊ ကချင် နှင့် မွန်တို့၏ ရိုးရာအကများ ပါဝင်ပါသည်။
အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ကရင်ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်သည့် မတင်တင်မိုးက သူမ၏ မိခင်နေထိုင်ရာ အုန်းဖျန် ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးစဉ် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းကို ဆလိုက်ရှိူးဖြင့် ပြသပါသည်။
မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခဲ့သော အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကို ရှုစားကြည့်ပါ။
ကချင် နှင့် မွန် ရိုးရာအက
ဟုတ်ကဲ့၊ ပြောဖို့မေ့သွားတယ်။ အကျွေးအမွေးက မုန့်ဟင်းခါး၊ ကော်ပြန့်လိပ်၊ ကြက်သားကင်၊ ထမင်းနဲ့ ဟင်း တွေလည်း ပါသမို့ စားကောင်းကောင်းနဲ့ ဗိုက်ကားသွားပါတယ်ခင်ဗျား။ ။
Posted by Thet Oo at 3:53 PM 1 comment:
ဒိန်းမတ်စာသင်တန်းများတွင် ဖတ်ရန်ပြဌာန်းထားသည့် စာအုပ်များအနက် ကျနော်ဖတ်ခဲ့သည့် စာအုပ် တအုပ်မှာ ပိုလန်နိုင်ငံသို့ ဘတ်စ်ကားဖြင့် အလည်သွားသည့် ဒိန်းမတ်ကျောင်းသူ ၂ ဦး၏ ခရီးသွားမှတ် တမ်းအကြောင်းရေးထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ထိုခရီးစဉ်ကို များသောအားဖြင့် ပင်စင်စား သက်ကြီး ရွယ်အိုများ သာသွားလေ့ရှိပြီး ကျောင်းသူနှစ်ဦးမှာ လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ခရီးမသွားဖြစ်သည့် အဖွားထံမှ လက်မှတ်ရသဖြင့်လိုက်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ကားဒရိုင်ဘာက ကျောင်းသူတဦးအပေါ် ဖွန်ကြောင်လာပြီး ပိုလန်အရောက် တောင်ပေါ်ရေအိုင် တခုတွင် ရေကူးကြရာ အလိုမတူပဲ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဟိုကိုင် ဒီကိုင် လုပ်သည် အထိ ကျူးလွန်လာသဖြင့် ခရီးသွားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အားတိုင်ကြားကာဒရိုင်ဘာအသစ်မှာယူခဲ့ရသည်။
ဒိန်းမတ်ကျောင်းသူ နှစ်ယောက်အနက် တဦးမှာ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းသူ ဖြစ်သောကြောင့် ခရီး သည်တဦး နေထိုင်မကောင်းဖြစ်၍ ဆေးရုံတင်ရာတွင် အကူအညီပေးရင်း ဆေးရုံမှ ပိုလန် လူငယ် ဆရာဝန်တဦးနှင့်ငြိတိတိဖြစ်လာခဲ့ပြီးဇတ်သိမ်းပါသည်။
ယခုနှစ် ခရစ်စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်များတွင် ခရီးသွားမည်ဟု စိတ်ကူးရကာ သတင်းစာပါ ခရီးသွားကြော်ငြာများကို လိုက်ဖတ်ရင်း ဟိုကြည့်သည်ကြည့်နှင့် နောက်ဆုံး ပိုလန်သို့ ဘတ်စ်ကားဖြင့် သွားသည့် ခရီးစဉ်ကို ရွေးဖြစ်သွားပါသည်။ နှစ်ညအိပ် သုံးရက်ခရီး ဟော်တယ်ခအပါအ၀င် ခရိုနာ တထောင် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ခန့်) သာ ကျသဖြင့် ဈေးသက်သာသည့် ခရီးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဇနီးဖြစ်သူက ဘတ်စ်ကားဖြင့် သွားလျှင် ပင်ပန်းမည် မလိုက်လိုပါဟု ဆိုလာသဖြင့် ခရီးသွားရန် အမြဲ စိတ်အားထက်သန်နေသည့် မိတ်ဆွေကြီး ဦးသောင်းကို အဖေါ်ပြုကာ ပိုလန်ခရီးစဉ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ မနက်တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။
ကောလင်း Kolding ကားဂိတ်မှ မနက် ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ထွက်ခွာလာသော ကျနော်တို့ လိုက်ပါ လာသည့် ဘတ်စ်ကားသည် လမ်းတွင် နှစ်နေရာ လူတင်ပြီးနောက် ဒိန်းမတ် နှင့် ဂျာမဏီ နယ်စပ်မြို့ ဖြစ်သည့် Padborg သို့ မနက် ၈ နာရီတွင် ရောက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းတွင်းအခါ ဖြစ်သည့်အလျောက် ၀န်းကျင်တွင် အလင်းရောင် မရှိသေးပါ။ Padborg တွင် ကားရပ်ပေးသဖြင့် နှစ်ဦးသား ကော်ဖီဝယ် သောက်ကြပါသည်။ ကော်ဖီတခွက်ကို ၁၅ ခရိုနာပေးရသဖြင့်ယူအက်စ်သုံးဒေါ်လာနီးပါးရှိပါသည်။
ရာသီဥတု အပူချိန်ကား ရေခဲမှတ်အောက် အနုတ် တစ်ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိသဖြင့် ကော်ဖီဆိုင်ရှေ့ ကွန်ကရစ်ပေါ်တွင်ရေခဲများတင်နေသဖြင့်ချော်မလဲရန်ဂရုစိုက်ရပါသည်။
ဟစ်တလာ၏အဖဂျာမဏီနိုင်ငံသို့ အ၀င်တွင် မည်သည့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ ရှိမနေပါ။ ကားပေါ်မှ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းများ sms လက်ခံရရှိသည့် အသံများ တတီတီမြည်နေပါသည်။ ခဏနေတော့ ကျနော့် ဟန်းဖုန်းလည်း sms ၀င်လာ၍ ကြည့်လိုက်ရာ ဂျာမဏီနယ်ထဲရောက်ပြီဖြစ်၍ ဟန်းဖုန်းပြောခ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲ ဈေးပို ပေးရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖုန်းကုမ္မဏီမှ ပို့သည့် မက်ဆေ့ခ်ျ ဖြစ်နေပါသည်။ အလင်းရောင်လည်း တဖြည်းဖြည်း ရလာပြီဖြစ်၍ လမ်းဘေးဝဲယာသို့ ကြည့်လိုက်ရာ အရွက်မရှိသော သစ်ကိုင်းတွေပေါ်မှာ ရေခဲမှုန်တို့ တင်နေပုံမှာ ဆံပင်ဖွေးဖွေးဖြူနေသော အဖိုးအို တယောက်ကို ကြည့်ရသည်နှင့်တူနေပါသည်။
အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာရုံးစိုက်ရာ ဘာလင်မြို့အဝေးပြေး ကားဂိတ်ကိုရောက်တော့ နေ့လည် တနာရီ ကျော် ဖြစ်ပါသည်။ ဒိန်းမတ်မှ စီးလာသော ဘတ်စ်ကားက ဆက်မသွားတော့ပဲ ပိုလန်တွင် ကျနော်တို့ တည်းမည့် ဟော်တယ်တံဆိပ်ပါ မီနီဘတ်စ် လာကြိုပါသည်။ ယာဉ်မောင်းသူက ဆက်ရမည့် ခရီးစဉ်ကို ဂျာမန်လိုရှင်းပြရာတွင် လမ်းတွင် ၁၀ မိနစ်နားမည်ဆိုတာကိုတော့ ဒိန်းမတ်စကားဖြင့် တူနေသဖြင့် နားလည်လိုက်ပါသည်။ သို့ဖြင့် ဘာလင်၏အရှေ့မြောက်ဖက်သို့ ဆက်၍ခရီးထွက်လာကြပြီးနောက် ပိုလန်နယ်စပ်သို့ ရောက်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂ ရက်ကပင် ရှင်းဂန်းဇုံ အဖွဲ့ဝင်သစ်ဖြစ်လာသည့် အတွက် ပိုလန်အ၀င် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ပတ်စ်ပို့ပြစရာ မလိုတော့ပါ။ ကျနော်တို့၏ ခရီးဆုံးမြို့သည် နယ်စပ်မှ သိပ်မဝေးလှပါ။ Stettin မြို့ထဲအ၀င် ဟော်တယ်မရောက်ခင် တိုးရစ်ဂိုက်အမျိုးသမီး ကားပေါ် တက်လာပြီး ဒိန်းမတ်ဘာသာဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ပါသည်။ ပိုလန်သံဝဲ၀ဲဖြင့် ဒိန်းမတ်လို ရှင်းပြနေတာ နားထောင်ရင်း ဒိန်းမတ်စာအတူသင်ခဲ့ရသည့် အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသားများကို သတိရမိပါသည်။ ဘာပဲပြောပြော သူတို့က ဥရောပတိုက်သားအချင်းချင်းဆိုတော့ ဒိန်းမတ်အသံထွက်ကို ကျနော်တို့ထက် ပို၍ နီးစပ်အောင် ပြောနိုင်ပါသည်။
ဟိုတယ်မှာ ရေချိုးပြီး ဟိုနားဒီနား လျှောက်ကြည့်ရင်း ကုန်တိုက်တခုကို ရောက်သွားသည့်အခါ ခရစ်စမတ် ရှော့ပင်းကာလဖြစ်နေသည့်အတွက် လူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေပါသည်။ ကုန်တိုက်မှာ ပစ္စည်းတွေလည်း အစုံအလင် ရှိ၍ ဒိန်းမတ်ထက်စာလျှင် ဈေးသက်သာပါသည်။ ကုန်ဈေးနှုန်း ဆိုသည် မှာလည်း သူ့နိုင်ငံသားတို့၏ ၀င်ငွေနှင့် ၀ယ်လိုအားပေါ်မှာ အခြေခံသည်မို့ နိုင်ငံသားတို့ ၀င်ငွေထွက် ငွေ မျှတပါက နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်စရာ လိုမည်မဟုတ်ပါ။ ဒိန်းမတ်မှာတော့ ပိုလန်လူမျိုး အတော်များများ အလုပ်လာလုပ်ကြပါသည်။
ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ခရီးပန်းလာသည်မို့ အနားယူ အိပ်စက်လိုက်ပါတော့သည်။ ။
ဒိန်းမတ်လိုပြောတတ်သည့် ပိုလန်သူ တိုးရစ်လမ်းညွှန်
Posted by Thet Oo at 4:13 PM No comments:
ကျနော်တို့ ဒိန်းမတ်ရောက်ခါစ အိမ်မှာကွန်ပြူတာ မ၀ယ်နိုင်သေးတော့ စာကြည့်တိုက်ကို ချောင်းပေါက်အောင် ရောက်ပါတယ်။ စာအုပ်ငှားဖို့ မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်သွားသုံးကြတာပါ။ စာအုပ်တွေကလည်း ဒိန်းမတ်စာအုပ် တွေချည်း စာကြည့်တိုက်အပြည့်ဆိုတော့ မဖတ်တတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် လိုချင်ရင် သူတို့မှာပေးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ဖတ်ဖို့ညွှန်းလို့ United States of Europe ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို မှာဖတ်ဘူးပါတယ်။ အမေရိကန်စာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ ဥရောပအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။
နောက်ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေမှာ ရည်ညွန်းထားတဲ့ မူရင်းဆောင်းပါးပါ မဂ္ဂဇင်းအဟောင်း တွေ စာကြည့်တိုက်မှာရှာခိုင်းကြည့်တုန်းကလည်း တိုင်းမ်စ်နဲ့ နယူးဝိခ်စ် မဂ္ဂဇင်းအဟောင်းတွေ ရလာခဲ့ပါတာပါပဲ။ အဲဒီကျတော့မှ ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်နဲ့ မူရင်းဆောင်းပါးကို တွဲဖတ်လို့ ရသွားပြီး ဘလော့မှာလည်း တင်ပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ။
လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က ကမ္ဘာကြီးသည် ဥရောပအမျိုးသားရေးဝါဒ၏ မျက်နှာနှစ်ခုကို မြင်ခဲ့ကြရသည်။ လျင်မြန်စွာ ပြိုကွဲပျက်စီးနေသော ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင် တက်ကြွနေသော လူအုပ်များသည် မျိုးဆက်တခုမျှ ပျောက်ကွယ်နေခဲ့သော
သူတို့၏ အမျိုးသားအလံများကို လွှင့်တင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို တောင်းဆိုသည့်အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသော အထိမ်းအမှတ်များကို ကျင်းပနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မိုင်ရာအနည်းငယ်မျှသာ ကွာဝေးသော ယူဂိုဆလားဗီးယားတွင်မူ ခရိုအေးရှားနှင့် ဆာဘီးယား ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များသည် သွေးချောင်းစီးသော လူမျိုးစုစစ်ပွဲတပွဲတွင် တယောက်ကို တယောက် သတ်ဖြတ်နေကြသည်။
လူများသည် မျိုးတူစုများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းမိလာခဲ့သည့်အချိန်မှ စ၍ အမျိုးသားရေးဝါဒဟူ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သဘောတရားတရပ်အနေဖြင့်မူ အမျိုးသားရေးဝါဒသည် ရိုမန်းတစ်လှုပ်ရှားမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတရပ် အဖြစ် ဆယ့်ရှစ်ရာစုနှစ် တွင် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရေးဝါဒ၏ အကောင်းဆုံးသော ပုံသဏ္ဍာန်သည် နွေးထွေးလှိုက်လှဲသော မျိုးချစ်ဝါဒ ဖြစ်သည်။ အိုလံပစ်ပွဲတော်များတွင် ကိုယ့်အမျိုးသားသီချင်းကို ကြားလိုက်သည်နှင့် လည်ချောင်းထဲတွင် တစ်ဆို့ကာ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်းထစေသော စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရေးဝါဒ၏ အဆိုးဆုံးပုံသဏ္ဍာန်မှာ မှားမှားမှန်မှန် ငါ့နိုင်ငံ၊ ငါ့လူမျိုးမှ ငါ့လူမျိုး ဟူသော ဂျင်ဂိုအစ်ဇင်း ဖြစ်သည်။ တနည်းပြောရလျှင် ရှောဗင်နစ်ဇင်း ဖြစ်သည်။ ရှောဗင်နစ်ဇင်း ဆိုသည်မှာ ပြင်သစ် ပြည်ကြီး၏ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် အာဏာစက်ကို လက်နက်အင်အားသုံး၍ ထူထောင်ရမည်ဟူသော အယူအဆကို ထူထောင်ခဲ့သည့် နပိုလီယန်၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တဦးဖြစ်သူ နစ်ကလတ်စ် ရှော်ဗင်၏ အယူအဆ ဖြစ်သည်။
သမိုင်းတလျှောက်တွင် နိုင်ငံရေးဝါဒ အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် အမျိုးသားရေးဝါဒသည် အပြင်းထန်ဆုံး အားအကောင်း ဆုံး ဖြစ်မည်ထင်သည်။ ဘာသာတရားကြောင့်မှလွဲလျှင် အခြားသော အကြောင်းအရာများထက် အမျိုးသားရေးဝါဒကြောင့် သွေးတွေ ချောင်းစီးခဲ့ဖူးသည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာပင် လှုံ့ဆော်ရေးသမားတို့သည် မိမိတို့၏ ဒုက္ခ၊ သုက္ခများအတွက် အိမ်နီးနား ချင်း လူမျိုးများကို အပြစ်ဖို့ကာ သွေးဆူနေသော လူအုပ်များကို လှုံ့ဆော်ဖူးကြလေပြီ။ ဆားဘီးယားခေါင်းဆောင် မီလိုဆီဗစ်နှင့် ခရိုအေးရှားခေါင်းဆောင် ဖရန်ဂျိုတူဂျမန်းတို့သည် ဤလုပ်ငန်းတွင် နောက်ဆုံးပေါ်လာသော ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
လာမည့်လများတွင် အမျိုးသားရေးလှုံ့ဆော်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာနေသည်မှာ ကံဆိုးသည်ဟုပင် ဆိုရတော့မည် ထင်သည်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံနှင့် အရှေ့ဥရောပတွင် နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုများကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုကြီးနှင့် ရိက္ခာပြတ်လပ် မှုတို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက အများထင်ထားသကဲ့သို့ ထိုကိစ္စများအတွက် အခြားသော လူမျိုးစုများအပေါ်တွင် ရမယ် ရှာရပေတော့ မည်။ ပိုလန်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ အဒမ်အစ်ရှနစ်က မကြာမီတွင် သွေးဒီရေကြီးတရပ် ပေါ် ပေါက်လာနိုင်သည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီတခုအတွက် ထောင်ချောက်ကတော့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီထောင်ချောက်ဟာ လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ် ဟု သူကပြောခဲ့သည်။ အနောက်ဥရောပသည် ထိုထောင်ချောက်ကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုနမူနာသည် အရှေ့ဥရောပအတွက် သင်ခန်းစာတရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
အမျိုးသားရေးဝါဒ၏ ဆွဲဆောင်မှုသည် လူ့သဘာဝလူ့စရိုက်အတွင်းတွင် နက်ရှိုင်းစွာ ၀င်ရောက်အမြစ်တွယ်လျက် ရှိသည်။ လူဆိုသည်မှာ မိမိနှင့် မျိုးရိုးဇာတိတူသောသူကို ခင်မင်တွယ်တာသော သဘောရှိသည်။ သူစိမ်းတရံဆံကို ဖယ်ထုတ်လို သော သဘောရှိသည်။ အမျိုးသားရေးဝါဒသည် မျိုးရိုးသစ္စာရှိမှုကို ထိန်းသိမ်းမှုတွင် အခြေခံသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ အခြား သော (နိုင်ငံရေး) သဘောတရားများသည် ပေါ်လာပြီး ပျောက်ကွယ်သွားကောင်း ပျောက်ကွယ်သွားကြမည်။ သို့ရာတွင် အမျိုး သားရေးဝါဒကား ပြင်းထန်အားကောင်း၍ မတိမ်ကောနိုင်သည့် ခွန်အားရှိသည်။
သမိုင်းပညာရှင်တဦးဖြစ်သူ အစ္စဗန်ဒီးယက်က လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅၀ အတွင်းတွင် အရှေ့ဥရောပ၌ လစ်ဘရယ် အစိုးရ၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်အစိုးရ၊ ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ၊ အာဏာရှင်အစိုးရ၊ ဖက်ဆစ်အစိုးရ၊ ဘော်လရှီဗစ်အစိုးရတို့ တလှည့်စီ ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအစိုးရများနှင့် ယင်းတို့၏ နိုင်ငံရေးသဘောတရား အားလုံးတို့သည် ယာယီမျှသာ ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။ ထာဝရဖြစ်သောအရာမှာ အမျိုးသားရေးဝါဒသာလျှင် ဖြစ်သည် ဟု ရေးခဲ့ဖူးသည်။
ကွန်မြူနစ်ဝါဒသည် အမျိုးသားရေးဝါဒထက် အားကောင်းသည်ဟု ထင်စရာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား လူတန်းစားစိတ်ဓာတ်သည် အဖနိုင်ငံအပေါ် သစ္စာရှိမှုထက်လည်းကောင်း၊ အလံတလံပေါ်တွင် သစ္စာရှိမှုထက်၎င်း ပို၍အားကောင်းသည်ဟု ကားလ်မတ် က ပြောခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ပထမ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အလုပ်သမားများသည် လက်နက်များကို ချထားရန် ဟောပြောခဲ့ကြသော ဆိုရှယ်လစ်များနောက်သို့ မလိုက်ဘဲ စစ်တိုက်ရန် ဟောပြောခဲ့ကြသည့် အမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်များနောက်သို့ လိုက်ခဲ့ကြသည့်အခါတွင် ကားလ်မတ်၏ သဘောတရားသည် သေဆုံးသွားခဲ့လေပြီ။ သို့တိုင်အောင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင် အနှစ်ခုနှစ်ဆယ်တိုင်တိုင်။ အရှေ့ဥရောပတွင် အနှစ်လေးဆယ်တိုင်တိုင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒသည် အမျိုးသားရေးဝါဒကို နှိပ်ကွပ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အမျိုးသားရေးဝါဒသည် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း မရှိ။ လှိုက်စားရုံ လှိုက်စားခဲ့သည်။
အရှေ့ဥရောပနှင့် အလယ်ဥရောပတို့တွင် အမျိုးသားရေးဝါဒကို လည်ပင်းညှစ်သတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေချိန်၌ အနောက် ဥရောပသည် အမျိုးသားရေးဝါဒကို ကျော်လွှားသွားရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်၏ အပျက်အစီးပုံများထဲမှ အနောက် ဥရောပ ကမ္ဘာကြီး တွားသွားထွက်လာချိန်တွင် ‘နောက်ထပ်ဤအဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေရ‘ ဆိုသည့် အသံများကို နေရာတကာတွင် ကြားနေရသည်။ အနှစ်ခုနှစ်ဆယ်မရှိတရှိ အတွင်းတွင် ဂျာမဏီနှင့် ပြင်သစ်အမျိုးသားရေးဝါဒတို့ကြောင့် ကမ္ဘာစစ်ကြီး နှစ်ခုအပါ အ၀င် ဥရောပတွင် စစ်ပွဲကြီးသုံးပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမဏီတို့၏ အားပြိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးရန်အတွက် အချို့ သော စနစ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ဥရောပလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခေါင်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည့် အီတလီအမျိုးသား အော်တီယာရှိ စပီနယ်လီက ထိုနှစ်ကာလများကို စောင်းငဲ့ကြည့်ကာ ကပ်ဆိုးကြီးကြောင့် အမျိုးသားရေးဝါဒသည် လူထုကြိုက် စိတ်ဓာတ်တခု အဖြစ်မှ စုတေသွားခဲ့လေပြီ ဟု ရေးခဲ့သည်။
အမျိုးသားရေးဝါဒကို မြေမြုပ်သဂြိုလ်ပစ်မည့် စနစ်သစ်၊ အဆောက်အအုံသစ်များကို ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု များသည် လွန်စွာအရေးကြီးသည့်အချိန်တွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များမှ နယ်စပ်ဒေသတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပြီး မိမိတို့လူမျိုးစုအကြားတွင် မကြာခဏ တိုက်ခိုက်မှုများပေါ်ပေါက်နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြရသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သူတို့ ဘာအတွက် တိုက်ခိုက်နေသည်ကို ကောင်းကောင်းသိကြသည်။ သူတို့၏ ယုံကြည်ချက်ကို သူတို့လို ဒုက္ခ သုက္ခများကို ခံစားခဲ့ ကြသူများမှ နားလည်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်စောစောပိုင်းနှစ်ဖြစ်သော ထူးခြား၍ တိုတောင်းသော ကာလတ၀ိုက်တွင် ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည့် ပြင်သစ်ခေါင်းဆောင် ရောဗတ်ရူးမန်း၊ ဂျာမဏီခေါင်းဆောင် ကွန်း၇တ်အဒီနော နှင့် အီတလီ ခေါင်းဆောင် အက်စီဒီ ဒီဂက်စပါရီ တို့သည် နိုင်ငံခြားအုပ်စိုးမှု (ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျာမန်တို့၏ အုပ်စိုးမှု) အောက်တွင် နေခဲ့ကြရသည်။ သူတို့အားလုံးသည် ဂျာမန်စကားကို ရေလည်စွာ ပြောတတ်ကြသည်။
သူတို့သည် နောင်တွင် ဥရောပဘုံဈေးအဖွဲ့ဟု ခေါ်တွင်မည့် အဖွဲ့အစည်းအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ချပေးခဲ့ကြ သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ ဌာနချုပ်တွင် ၀န်ကြီးများစုဝေးကာ နို့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရေးအတွက် အချင်းချင်း အမြဲလိုလို ရန်ဖြစ်နေကြ သည့် ယနေ့အချိန်မျိုးတွင် ဥရောပဘုံဈေးအဖွဲ့ကို ဘေးဖယ်ပစ်ရန်လွယ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုံဈေးအဖွဲ့၏ အောင်မြင်စွမ်းဆောင် မှုများသည်လည်း ကြီးမားပါသည်။ ဥရောပဘုံဈေးအဖွဲ့ကြီးရှိနေသဖြင့် ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမဏီတို့ကြားတွင် နောက်ထပ်စစ်ပွဲတခု ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိ။ ယနေ့လည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်နေပါသည်။
ဥရောပဘုံဈေးအဖွဲ့သည် ထိုအလုပ်တွင်များစွာ အောင်မြင်လျက်ရှိရာ ယခုအချိန်တွင် အရှေ့ဥရောပတွင် တနိုင်ငံနှင့် တနိုင်ငံပြိုင်ဆိုင်ကြရန် တိုက်တွန်းနေသံများကို ကြားနေရသည်။ ယခင်တပတ်ကပင် အာမေးနီးယားသမ္မတ လီဗွန်တက်ပင် ထရိုစီယန်က ကျွန်တော်တို့ ဥရောပဘုံဈေးအဖွဲ့ရဲ့ နည်းအတိုင်းဓနသဟာယအဖွဲ့ တခုကို ထူထောင်ဖို့အတွက် ရရှိနေတဲ့အခွင့် အရေးတွေကို အသုံးချကြရလိမ့်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် သမိုင်းဆိုသည်မှာ တပတ်ပြန်ကျော့လေ့ရှိသည်ဟု ဆိုကြသော်လည်း ဘယ်တော့မှ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်လေ့ မရှိပါ။ ဥရောပအနောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတွင် လူမျိုးစုအင်အားကြီးနိုင်ငံတခုဖြစ်သော ရုရှသည် အခြားသော လူမျိုးစုများအပေါ် တွင် လွှမ်းမိုးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အနောက်ဥရောပတွင်မူ ပြင်သစ်၊ အနောက်ဂျာမဏီနှင့် အီတလီတို့သည် ခပ်စောစောပိုင်းအထိ အရွယ်ပမာဏချင်း တူညီနေကြပြီး တဦးကိုတဦး ချိန်ခွင်လျှာညီအောင် ထိန်းထားနိုင်ကြပါသည်။
အရှေ့ဥရောပအဖို့ အနောက်ဥရောပထံမှ သင်ခန်းစာယူနိုင်စရာအချက်မှာ ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသား ငွေစက္ကူစနစ်ရှိရုံ၊ ကိုယ်ပိုင် အမျိုးသားစစ်တပ်ရှိရုံမျှဖြင့် စစ်မှန်သော လွတ်လပ်မှုနှင့် စစ်မှန်သောလွတ်လပ်ရေးကို မရနိုင်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်ပါ သည်။ မည်သူကမျှ ဗိုလ်မကျနိုင်သော နိုင်ငံတိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသော လူမျိုးစုံ အဖွဲ့အစည်းကြီးတခုအတွင်း၌သာလျှင် လူမျိုးစု တို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ဥရောပဘုံဈေးအဖွဲ့ အောင်မြင်နေခြင်းမှာ အခြားကြောင့် မဟုတ်။ နိုင်ငံတိုင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသော တခုနှင့်တခု ဆက်သွယ်နေကြသည့် ထာဝရ စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုကွန်ခြာကြီးကို ထူထောင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ပိုလန်ခေါင်းဆောင် မစ်ရှနစ်က အလယ်နှင့် အရှေ့ဥရောသည် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ နှစ်ခုအနက် တခုခုကို ရွေးရတော့မည် ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပူးပေါင်းကြပါစို့၊ ဥရောပစံများကို လေးစားလိုက်နာကြပါစို့ လို့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုက ပြောနေတယ်၊ နောက် ယဉ်ကျေးမှုတခုကတော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ မူလအမျိုးသားဇစ်မြစ်များဆီသို့ ပြန်သွားကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့ အမျိုးသားများ၏ သီးခြားသော ဟန်ဖြင့် စနစ်သစ်တရပ်ကို ထူထောင်ကြပါစို့ဟု ပြောနေတယ် ဟု သူကပြောခဲ့သည်။
ရှူးမန်း၊ အဒီနောနှင့် ဂတ်စပါရီ တို့သည် အနောက်ဥရောပတိုက်အား အမျိုးသားသီးခြားဆန်မှု နယ်နိမိတ်ကို ကျော်၍ ကြည့်ရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။
ပျက်စီးစေတတ်သော အမျိုးသားရေးဝါဒကို ကျော်လွှားရန်အတွက် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဟောင်းများသည် အတိတ်မှ အမုန်း တရားများကို မေ့ပျောက်ပစ်နိုင်သော ခေါင်းဆောင်များရှိဖို့လိုပါသည်။
ရည်ညွှန်း ။ Time, September 9, 1991.
Posted by Thet Oo at 10:33 AM No comments:
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ မလေးရှားလာကြတာ အလုပ်လုပ်ဖို့ လာကြတာပါ။ ပတ်စ်ပို့နဲ့ပဲလာလာ၊ တောင်ကျော် ရေကျော်နဲ့ပဲလာလာ မလေးရှားရောက်ရင် အလုပ်ဝင်လုပ် အချိန်ပိုဆင်း အိမ်ကိုငွေပို့၊ အားရင် မြန်မာကားကြည့်၊ အပတ်စဉ် မဂ္ဂနမ်(မလေးရှားထီ)ထိုး၊ ပိတ်ရက်ဆိုရင် ဘီယာသောက်သူသောက်၊ ပေါ်ကာဒေါင်းသူဒေါင်းပေါ့။ အဲလိုနဲ့ နေလာလိုက်ကြတာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကလည်း ကောင်းမလာ၊ မလေးရှားမှာလည်း လုပ်လုပ်စားစားနဲ့ဆိုတော့ မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်လိုပဲ မရေမရာ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ တချို့လည်း မလေးရှားမှာ အခြေအနေမကောင်းဘူးဆို မြန်မာပြည်ပြန်သွားလိုက် ဟိုရောက်တော့ ပိုဆိုးနေတော့ ပြန်ရောက်လာနဲ့ တချို့ဆို ၂ ခေါက်ပြန် သုံးခေါက်ပြန်တွေတောင်ရှိလာပါပြီ။
ကျနော်လည်း အများထဲက တယောက်မို့ မလေးရှားသံသရာလည်နေရင်း ၂၀၀၃ ခုနှစ်အရောက် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းဆိုပြီး ပြည်တွင်းမှာ အန်တီစု နဲ့ ဦးတင်ဦးတို့ အဖွဲ့ကို လုပ်ကြံတဲ့ ကြံစည်မှုကြီး ဖြစ်ပါလေ ရော။ အဲဒီအရေးအခင်းကို မကျေနပ်လို့ဆိုပြီး ကျနော်တို့ မြန်မာတစု ကွာလာလမ်ပူက မြန်မာသံရုံးရှေ့ကို သွားပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီကစလို့ မလေးရှားမှာ နိုင်ငံရေးအရ စုဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။
တချိန်တည်းမှာ နိုင်ငံရေးကို အခြေခံပြီး ယူအမ်လျှောက်တာတွေလည်း ပေါ်လာပါတယ်။ မလေးရှား မှာ လမ်းပေါ်မှာ ဆန္ဒပြရင် ဥပဒေနဲ့ ငြိစွမ်းတာမို့ ရဲက ဖမ်းပြီး အရေးယူပါတယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ မြန်မာ တွေအဖို့ ယူအမ်ကိုပဲ အားကိုးရတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း တနေ့တော့ ကျနော်လည်း ဒုက္ခသည် လျှောက်ထားဖို့ ယူအမ်ရုံးကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR (မလေးရှားဌာနခွဲ) ဟာ ကွာလာလမ်ပူရဲ့ စိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်တခုထဲမှာ ရှိပြီး အဲဒီနေရာကို အများပြည်သူ အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေတဲ့ ဘတ်စကား၊ မီးရထားတို့နဲ့ သွားလို့ မရပါဘူး။ တက္ကစီငှားပြီးသွားရတဲ့ သီးသန့်နေရာ တခုပါ။
ကျနော်ရောက်တဲ့ မနက်က ဒုက္ခသည် လာလျှောက်သူ ဦးရေ လူနှစ်ရာကျော်ရှိပါတယ်။ အများစုက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားက ခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Aceh ပြည်နယ်သားတချို့ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ရုံးပေါက်ဝမှာ တိုကင်တွေထုတ်ပေးတော့ ကျနော်ရတဲ့ စာရွက်မှာ တိုကင်နံပါတ်တခုနဲ့ အတူ Myanmar (O) လို့ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ ချင်းတွေကို ထုတ်ပေးတဲ့စာရွက်မှာတော့ CHIN လို့ရေးထားပြီး၊ အာချီးပြည်နယ်သားတွေကိုတော့ Aceh လို့ရေးထားတော့ မှတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူအောင် အုပ်စုခွဲထား ပုံရတယ်လို့ နားလည်လိုက်ပေမယ့် မြန်မာမှာ ဘာဖြစ်လို့ O (အို) ပါနေရတာလဲ။ ငါ အိုဗာစတေးဖြစ်နေတာ သူတို့က ဘယ်လိုလုပ်သိနေတာလဲ စသဖြင့် ကျနော့်မှာ အတွေးတွေ ပွားနေမိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ မေးစရာလူ လိုက်ရှာတော့ သံဆူးကြိုးကာထားတဲ့ ခြံစည်းရိုးနားမှာ စားပွဲလေးချပြီး ထိုင်နေတဲ့ ယူအမ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး ကို တွေ့ပါတယ်။ What does this mean O here? လို့ မေးလိုက်တော့ It means other. လို့ ဖြေပါတယ်။ ဟာ.. ဒါဆို ငါက မြန်မာဆိုပေမယ့် အမျိုးအမည်မသိတဲ့ အခြားအုပ်စုဝင် ဖြစ်နေပါလားလို့ သဘော ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတော့ ကျနော်နောက်က Myanmar ဆိုပြီး ကွင်းစကွင်းပိတ် အို မပါတဲ့ တိုကင် ကိုင်ထားသူတွေ ၀င်လာတာ ကြည့်လိုက်တော့ ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ တွေဖြစ်နေပါတော့တယ်။ သူတို့ကို ယူအမ်က မြန်မာလို့ သိထားပြီး မြန်မာလိုမွှတ်နေတဲ့ ကျနော်တို့ကတော့ အခုမှ ယူအမ်လာတင်ကြတာမို့ Myanmar (O) မရေမရာ မြန်မာအုပ်စုလို့ သတ်မှတ်ထားကြောင်း ကျနော်လည်း နားလည်လိုက်ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီနေ့က ယူအမ်က ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း စာရွက်ကိုတော့ ရလာခဲ့တာ မို့ မြန်မာမှာ အိုပါသူရော အိုမပါသူပါ ယူအမ်စာရွက်ကိုင်တာချင်းတော့ အတူတူ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းပါခင်ဗျား ။ ။
Posted by Thet Oo at 3:23 PM2comments:
Posted by Thet Oo at 11:47 AM No comments:
ကျနော် ဆယ်တန်းနှစ်မှာ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း သွားတက်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ စက်မှုကျောင်းဆင်းတွေ ၈၈ အရေးအခင်း နောက်ပိုင်း စင်္ကာပူ နဲ့ မလေးရှားကို အလုပ်ထွက်လုပ်ကြတော့ အဆင်ပြေကြသူများ ပါတယ်။ ကျောင်းတုံးက စာတွေ့လက်တွေ့သင်ပေးလိုက်တာရယ်၊ စက်ရုံတွေမှာ လုပ်သက် အနည်းဆုံးလုပ်သက် လေးငါးနှစ် ရှိခဲ့ကြတာကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ကျောင်းဆင်းတွေတင် နိုင်ငံခြားထွက်တာ မဟုတ်ပါ။ စီးပွားရေးက တစတစ ကျပ်တည်းလာတာကြောင့် ကျနော်တို့ကို သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတွေလည်း နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ တချို့ အဆင်ပြေသလို တချို့ကျတော့ အဆင်မပြေကြပါဘူး။ အဆင်ပြေတဲ့ဆရာတယောက်ကတော့ အခုထိ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေဆဲပါ။ ဆရာတယောက်ကတော့ မလေးရှားမှာ အလုပ်တွေအဆင်မပြေပါဘူး။ ဆရာက မလေးရှားကို ပွဲစားနဲ့ထွက်လာတယ်။ ပွဲစားသွင်းပေးတဲ့ စက်ရုံမှာ သူမလုပ်ချင်တော့ မလေးရှားရောက်နေတဲ့ တပည့်တွေကို အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး တခြားစက်ရုံ ပြောင်းပါတယ်။ အဲဒီစက်ရုံမှာလည်း အလုပ်ရှင်ကြိုက်အောင် သူလုပ်မပြနိုင်ပါဘူး။ ဆရာ့အတွက် စိတ်ညစ်ရတာတော့ မလေးရှားမှာ အီးပီနဲ့နေပြီး မိသားစုပါခေါ်ထားနိုင်တဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းပါ။ ဆရာက သူ့ကို အပူကပ်နေတော့ သူမှာ လုံးလုံးတာဝန်ရှိနေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။
တရက်တော့ သူ့အိမ်မှာ အလှူလုပ်တုံး ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံတုံး စားကြ သောက်ကြနဲ့ စကားကောင်းနေတုံး ဆရာ့အကြောင်း ရောက်သွားပါတယ်။ ဆရာအလုပ်တွေ အဆင်မ ပြေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟိုတလောကပဲ သူ့အိမ်မှာ လာ `ဂိန်´သွားကြောင်း၊ အလုပ်တခု ရှာသွင်းပေးလိုက် ပြန်ရောက်လာလိုက် ဖြစ်နေကြောင်းကို အိမ်ရှင်သူငယ်ချင်းက အားလုံးရှေ့မှာ ညည်းပြတော့၊ တယောက် က ရုတ်တရက် ထမေးလိုက်တာက `ဆရာက မကျွမ်းလို့လား´ တဲ့။ သူဆိုလိုတာက ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရပ်မှာ တကယ်တတ်ရင် အဆင်ပြေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက ရုတ်တရက် ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဖြစ်သွားစေတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ကိုယ့်ကို သင်ပြပေးထားတဲ့ ဆရာကို မကျွမ်းကျင်ဘူးလို့ ဘယ်တပည့်က ပြောရက်ပါ့မလဲ။ ကျွမ်းတယ်လို့ပြောရအောင်လည်း လက်တွေ့မှာက ဆရာက အလုပ်မမြဲဘူး လေ။ အားလုံးချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ဘေးနားမှာ ခလေးထမင်းခွန့်နေတဲ့ အိမ်ရှင်အမျိုးသမီး ၀င်ပြောလိုက်မှပဲ အားလုံး အသက်ရှုချောင်သွားရပါတယ်။ သူဝင်ပြောလိုက်တာက `ဆရာက ကျွမ်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မေ့ကုန်ပြီ´ တဲ့။ `ကျွမ်းတော့ ကျွမ်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် မေ့ကုန်ပြီ´ ကဲ . ဘယ်လောက်များ သံတမန် ဆံတဲ့ စကားလဲ။ ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ အခုလို ထွက်ပေါက်ပေးတဲ့ စကားမျိုးကို ပြောလိုက်တာ အ်ိမ်ရှင်မတဦးဖြစ်နေတာကို ကျနော် အံ့သြ၍မဆုံးတော့ပါ။
ဒါကြောင့်လည်း တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ပုခက်လွှဲတဲ့လက်ကို အိမ်တွင်းမှုကိစ္စမှာတင်မထားပဲ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေး နေရာတွေမှာ တာဝန်ပေးနေရတာပါလားလို့ တဆက်တည်း တွေးနေမိပါတယ်။ ။
Posted by Thet Oo at 9:42 AM 1 comment: